Isithombe esisha sikaMichael Myers Ku-'Halloween Kills 'Kubukeka Kujwayelekile - iHorror
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo Isithombe Esisha sikaMichael Myers Ku-'Halloween Sibulala 'Kubukeka Kujwayelekile
Isithombe Esisha sikaMichael Myers Ku-'Halloween Sibulala 'Kubukeka Kujwayelekile
by UTrey Hilburn III January 6, 2021
ebhalwe ngu UTrey Hilburn III January 6, 2021
Umumo nakanjani uzobuya ngelinye ilanga. Yize kungukushaywa kweqiniso lokho I-Halloween Iyabulala kufanele kube yinto esizijabulele kakhulu ngayo kungekudala, okungenani ekugcineni sizoyibona. Esithombeni sakamuva esabiwe yiTotal Film, uMichael Myers uthatha indawo ajwayelene nayo phezulu esitebhisini esijwayelekile.
Kuke kwaba namahlebezi azungeza athi kuzoba nezigcawu eziqoshwe endlini kaMyers, futhi mhlawumbe yilokho esikubhekile lapha. Halloween U-2018 uqinisekile ukuthi uthanda ukudlala ngokuthembekile kwifilimu yasekuqaleni, ephuma kuwo wonke ama-minutia. Baze baqinisekisa nokufaka imbobo kumaski kaMichael lapho uJamie ayemgwaze khona ngesiphanyeko sejazi. Ngakho-ke, ukuphuma kwabo nokugcina izinto zinembile kakhulu nendlu yangempela kaMyer ngeke kusimangaze.
UJohn Carpenter unikeze ifilimu izilinganiso ezinhle kakhulu ngonyaka owedlule ezirekhodwe ukuthi,“Yifilimu ye-slasher esesilinganisweni… Inamandla kakhulu… oh nkosi yami… iyangimangaza nokuthi iyamangalisa kanjani. UDavid wenze nje umsebenzi omuhle. Angisakwazi ukulinda uze uyibone. ”
Lawo amamaki aphezulu aqhamuka kuMbazi. Imvamisa uhlala enenkinobho enhle ngalezi zinhlobo zezinto. Kepha, ukumuzwa ezwakala njengomlandeli wangempela womsebenzi lokho Blumhouse iyaqhubeka I-Halloween Iyabulala kuyajabulisa.
Ngabe nina bantu nicabangani ngesithombe esisha? Cabanga ukuthi yindlu yakwaMyers noma isitebhisi esivamile se-ole? Kunoma ikuphi, kuhle ukuthi bahloniphe ukuma kwabo.
Abafokazi bazobonakala eMarvel kulo nyaka. Funda kabanzi lapha.
I-Halloween IyabulalaJamie Lee Curtismichael myersIMyers HouseIsimo
UJames Wan's 'Malignant' Uthola Isilinganiso Esisemthethweni se-R
I-trailer 'Enobuso Obujabulayo' Isikhombisa “Izilo” Emphakathini Ogcwele Ubuhle